Qurux Badana Guriga Arooska Deepika Iyo Ranver Ka Dhici Doono 15 November (+Sawiro) – Filimside.net
Qurux Badana Guriga Arooska Deepika Iyo Ranver Ka Dhici Doono 15 November (+Sawiro)
October 23, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: October 23, 2018
Wey bilaawatay hadal heynta arooska lamaanaha caanka ah Ranver Singh iyo Deepika Padukone kuwaaso si rasmi ah shaaca kaga qaadeen inee is guursan doonan sanadkan qaasatan bisha November.
Inbadan xog kusaabsan lamaanahan inee is guursan doonan bisha November waan idiin la wadaagnay balse waxay ahed xog laga soo xigtay lamaanahan haderse waxaa la ogaaday xog rasmi ah maadama Deepika Padukone shaaca ka qaaday guurkaan.
Ranver iyo Deepika labadoodaba ayaa waxay baraha bulshada si rasmi ah ugu shaaciyeen xiliga arooskoda dhacaayo oo ay ku sheegen in 14 Nov ilaa 15 Nov socon doono dabaal daga arooskoda.
Horey ayee taageerayaashoda ugu mahadceliyeen dhowr jeer baraha bulshada xili qaban qaabada guurkoda iyo xiriirkoda ay ugu hambalyeenayeen, Bollywoodka waxay si rasmi ah u ogaadeen xiriirka Deepika iyo Ranver iyo xilige is guursan doonan.
Warar badan iyo xog badan oo lamaanahan kusaabsan ayaa lasoo daabacaya hader si isdaba joog ah kadib markee kudhawaaqeen guurkoda, hader waxaa lasoo bandhigay goobta Italy ay ku aqal gali doonan sawiro ka turjumayaan waa guri qurux badan oo Hall weyn leh qeyb walba oo guriga Villa-da ah ayaa lasoo bandhigay.
Lama shaacinin inee Talyaaniga isku guursan doonan balse warakra hordhaca waxay sheegayaan inee ku aqal gali doonan arooskodana ka dhici doono magaalada Lake Como ee Italy kutaalosido kalena waxaa lasoo bandhigay guriga ama Villa-da arooskoda ka dhacaayo halkaan hoose ka daawo sawirada goobta arooska lamaanahan la filaayo inuu kadhaco.